Numeri Vhidhiyo Chidzidzo muGerman, Die Zahlen Chiverengero Vhidhiyo Chidzidzo muchiGerman
Nhamba dzeGerman Vhidhiyo Chidzidzo neVhidhiyo
Shamwari dzinodiwa, muchidzidzo chakapfuura German numbers Takatsanangura nyaya zvakadzama kubva pakutanga kusvika pakupedzisira. Muchidzidzo ichi, tichaona musoro wenyaya weGerman Numeri nevhidhiyo. Sezvaunenge uchitoziva, isu hatidi kutaura kukosha kwemanhamba echiGerman, sezvo chiverengero chenhamba mumitauro yese chiri pakati pezvidzidzo zvekutanga kudzidzwa mushure mearufabheti.
Upenyu hwezuva nezuva inyaya iyo iwe uchasangana nayo kwose kwose.
Zvisinei, zvakakosha kusimbisa ruzivo rwakadzidzwa nehuwandu hwekudzidzira nekudzokorora.
Iwo maekisesaizi akawandisa pane ino nyaya, inokurumidza uye nekunyatso nhamba inodiwa ichadudzirwa muchiGerman.
Regai tikupei mamwe mashoko pamusoro pezvizvarwa zveGermany musati maona nyaya dzechiGermany nhamba.
Kana iwe ukaterera, hapana system ine nhamba dzinosvika gumi nembiri. Kubva pa12, ivo vari kufambira mberi zvakarongeka.
Zvisinei, munyika ino, 16 uye 17 vanofanira kuteerera musiyano kwenhamba chiperengo .. (6 uye 7 pamwe karşılaştırınız.sieb nhamba = = sechs sieben uye uchaona kuti seche)
Iwo manhamba mushure memakumi maviri, anoreva "uye" pakati peaya nemakumi.uyeInowanikwa nekuisa izwi ".
Nekudaro, kusiyana neTurkey, nhanho imwe inouya kutanga.
Saka patinotaura 21 (makumi maviri nerimwe), tinotaura chidimbu (makumi maviri) uye zvino chidimbu (imwe).
MuGerman, yekutanga uye makumi maviri anoimbwa.
Onawo makumi maviri eGermany:
21: ein und zwanzig (one makumi maviri = makumi maviri nerimwe)
22: zwei und zwanzig (svay und svansih) (maviri nemakumi maviri = makumi maviri nemaviri)
23: drei und zwanzig (dray und svansih) (makumi maviri nematatu = makumi maviri nematatu)
24: vier und zwanzig (fi: ig und zwanzih) (makumi mana nemana = makumi maviri nemana)
25: fünf und zwanzig (fünf und svansih) (makumi mashanu nemakumi maviri = makumi maviri nemashanu)
26: sechs und zwanzig (zeks und svansih) (makumi matanhatu nemakumi maviri = makumi maviri nematanhatu)
27: sieben und zwanzig (zi: bu und svansih) (makumi maviri nemanomwe = makumi maviri nemanomwe)
28: acht und zwanzig (aht und svansih) (masere makumi maviri nemasere = makumi maviri nemasere)
29: neun und zwanzig (noyn und svansih) (makumi mapfumbamwe nemakumi maviri = makumi maviri nemapfumbamwe)
Sezvataona mumuenzaniso uri pamusoro apa, tinonyora madijita muzviwandiso kutanga,
Isu tinowedzera izwi rekuti "und" uye tinonyora makumi emadhijiti.
Uyu mutemo unoshanda kune ese manhamba kusvika zana (kusanganisira 30-40-50-60-70-80-90). Ndokunge, kutanga iwo manhamba, ipapo makumi emadhijiti anonzi.
Ngatitariseiwo kuti manhamba anonyanya kunyorwa padhuze, asi isu takanyora manhamba hafu zvakasiyana mumienzaniso yedu (semuenzaniso neunundzwanzig) kuita kuti zvive nyore kunzwisisa uye kuti zvionekwe nyore.
Tichaenda kunyorera nhamba inotevera sekusanganiswa.
Ngationei mazita echiGerman chidzidzo chidzidzo zvino:
10. kirasi nhamba dzechierman9. kirasi nhamba dzechierman9. kirasi german nhamba nhauriranoGerman numbersnhamba dzechiGermany dzinopikisa nyayaGermanGerman numbers